Wasaaradda Gargaarka oo ku socota jidkii wasaaradda Sports-ka | KEYDMEDIA ONLINE
Wasaaradda Gargaarka oo ku socota jidkii wasaaradda Sports-ka
Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka, ayaa la soo sheegayaa in ay howlihii muhiimka ahaa istaageen markii madaxa ugu sarreeya ee wasaaradda laga dhigay Marwo Khadiijo Maxamed Diirriye.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa durba soo baxaya tabashooyin la xariira habsami u socodka howlaha Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka, taas oo la sheegayo in aan wax shaqo ah la qaban tan iyo markii ay xaafiiska timid Wasiir Khadiijo Maxamed Diiriye, oo laga soo badaly Wasaaradda Cayaaraha iyo Dhallinyarada.
Wasiir Khadiijo, oo ku dhawaad afar sano ka shaqeyneysay Wasaaradda Ciyaaraha ayaa ugu danbeyn laga badalay wasaaradda oo aan xarun iyo xaafiis ay ku shaqeyso toona lahayn, isla-markaana ay shaqaaluhu ku jiraan fasax muddo ku dhow labo sano, sida uu sheegay Xamza Siciid Xamza oo kala wareegay xilka dabayaaqadii sanadkii hore.
Xubin firfircoon oo ka tirsan howl-wadeennada Wasaaradda Gargaarka ayaa u sheegay Keydmedia Online, in ay jirto hadal heyn xoogaysatay saacadihii la soo dhaafay, taas oo ku aaddan in Wasaaraddu cagta saartay jidkii fashilka ee Wasaaradda Ciyaaraha.
Shaqsigaan oo aan magaciisa qarinnay wuxuu xusay in shaqaalaha wasaaradda oo ku dhow 130 qof, ay intooda badan fasax galeen tan iyo markii uu xaafiiska banneeyay Xamza, shaqada ugu badan ee wasaaradda laga qabtana ay noqotay, soo dhweyn iyo sii dhaweyn uu wasiirku u sameeyo madax kale.
Waxaa dalka ka jira xaalado bini’aadannimo oo daran sida fatahaadihii uu wabiga Shabeelle, ka sameeyay Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, iyo abaaraha baahsan ee ku dhuftay Bay iyo Bakool, mana jiro wax gurmad ah oo Wasaaradda Gargaarku sameysay tan iyo markii Marwo Khadiijo la wareegay xaafiiska, marka laga yimaado, deeqo aan buurneyn oo hay’ado caalami ah ay kala daaratay wasaaraddu.
Wasiir Khadiijo, waxa ay caan ku tahay hadallada jawaabaha u badan oo ay baraha bulshada kaga difaacdo Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullahi Farmaaajo, halka ay maalmihii na weydaartay u dabaal degeysan Barkhad Jaamac Batuun oo matalaya beelaha la haybsooco, kaas oo ku soo baxay golaha wakiillada Somaliland.
Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka, waa mid ka mid ah Wasaaradaha ugu muhiimsan dalka, waxaana dhidibada u mudday Wasiir Maryam Qaasim oo lagu xasuusto in ay xilka iska casishay kadib markii Xukuumaddu musuqday lacag gurmad ah oo loo aruuriyay dadkii ku wax-yeelloobay qarixii 14-kii Oktoobar ka dhacay Muqdisho.
Keydmedia Online waxa ay saddex cisho ka hor baahisay musuq baahsan oo hareeyay wasaradda ciyaaraha, kadib markii ay boob xooggan ku kaceen Khadiijo iyo Xamza oo wasaadda isku badelay, xaiiqda muquqaas ayaana bannaanka yimid kadib markii wasiir Xamza uu sheegay inuu la wareegay wasaarad kaliya magac ahaan jirta oo aan xarun iyo miisaaniyad toona lahayn.
Afhayeenka Xukuumadda oo loo qaaday dalka Turkiga
Warar 17 January 2022 18:14
Maxamed Ibraahim Macalimuu, ayaa dhaawaciisa loo qaaday dalka dibaddiisa, waxaana ku sagootiyey garoonka Aaden Cadde, xubno ka tirsan Golaha Wasiirrada, Mas’uuliyiinta Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha iyo saaxiibadiis ay isku mihniyadda ahaayen ee saxafiyiinta caasimadda.
UK oo $10 Milyan oo dollar ugu deeqday Soomaaliya
Warar 17 January 2022 16:54
Al-Shabaab oo weerar ka geystay duleedka Mandheera
Warar 17 January 2022 13:34
EU: DF kama go’na la dagaalanka burcad badeeda
Warar 17 January 2022 12:52
Ku dhawaad hal milyan oo qof oo ku nool Bariga Afrika ayaa lagu taageeri doonaa maalgelinta cusub ee UK, si looga jawaabo mid ka mid ah abaarihii ugu xumaa ee gobolka ka dhacay muddo tobanaan sano ah iyo daadad aan horay loo arag.